Xiaomi Mi Box S Android 8.1WiFi 4K တီဗီသေတ္တာကိုအခမဲ့ဝယ်ယူပါ WoopShop®
$79.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $113.99
plug အမျိုးအစား eu Plug
Xiaomi Mi Box S Android 8.1WiFi 4K TV Box - Eu Plug backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အမည်: Xiaomi က
ဗီဒီယိုကို Output: HDMI 2.0
CPU ကို: Cortex-A53 Quad-core 64bit
GPU ကို: Penta-Core မာလီ-450
OS ကို: အန်းဒရွိုက်
ပြည်တွင်းသိုလှောင်မှု: 8GB eMMC
မှတ်ဉာဏ်: 2G DDR3
GOOGLE သွန်း Yes
အလေးချိန်: 147 ဂရမ်နှင့် ပတ်သက်.
OTA Update ကို: Yes
Power: DC က 5V, 2A
System ကို Upgrade: Yes
မက်စ် တိုးချဲ့နိုင်သောစွမ်းရည် - TF ကဒ် 32GB သို့
Android 8.1 မှစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက် - Mi Box S ကို Android 8.1 ဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအသံရှာဖွေမှုနှင့် Chromecast ကိုပံ့ပိုးသည်သာမကမိသားစုတစ်စုလုံးပျော်ရွှင်စွာခံစားနိုင်မည့်ကမ္ဘာလောကကိုပို့ဆောင်ပေးသည်။
ပါဝင်မှုတန်ချိန်များ - သင်ထောင်ပေါင်းများစွာသောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်လိုက်ဖက်ပြီးသင့်အားပရီမီယံဗွီဒီယို ၀ န်ဆောင်မှုများစွာနှင့်အသစ်သောအကြောင်းအရာအသစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်းစေနိုင်သည်။
Chromecast ပါ ၀ င်သည့် SmartCast - ပိုမိုကြီးမားသောကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံသို့ရေငုပ်ခြင်း
ရှင်းလင်းပြတ်သားမှု 4K HDR - နောက်ဆုံးပေါ် 4K HDR နည်းပညာနှင့် 4fps ပြန်ဖွင့်မှုအတွက်မြန်နှုန်းမြင့် 60K အပြောင်းအလဲများပါရှိသည်။ Ultra-high-definition၊ ဘဝနှင့်တူသည့်ကြည့်ရှုခြင်းအတွေ့အကြုံကိုခံစားပါ
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်သိုလှောင်နိုင်စွမ်း - ပိုမိုမြန်ဆန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်တည်ငြိမ်မှုကိုခံစားရင်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအက်ပ်တန်ချိန်များစွာကိုတပ်ဆင်ပြီးတိုးချဲ့ဖြတ်တောက်မှုများကိုကြည့်ရှုပါ၊
အမှတ်တံဆိပ် Xiaomi က
ပုံစံ Xiaomi က Mi Box ကို S က
ရှုထောင့် အရှည်: 95.25mm၊ အကျယ်: 95.25mm၊ အထူ: 16.7mm၊ အလေးချိန်: 147g၊ အရောင်: အနက်ရောင်
ရလဒ်ဆုံးဖြတ်ချက် 4K (3840 2160 x)
စီပီယူ Cortex-A53 Quad-core 64bit
GPU ကို Mali-xnumx
ရမ် 2GB DDR3
သိုလှောင်ခြင်း 8GB eMMC
ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် အန်းဒရွိုက် 8.1
ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှု ဝိုင်ဖိုင် - 802.11a /b/ g / n / ac 2.4GHz / 5GHz
ကုတ်နံပါတ် Video decoder: 4K@60fps,VP9,H.265,H.264,MPEG1/2/4,VC-1,Real8/9/10
ဗီဒီယိုအမျိုးအစား: RM, MOV, VOB, AVI, MKV, TS, Mp4,3D
Audio ဒီကုဒ်ဒါ: DOLBY, DTS
အသံအမျိုးအစား: MP3, APE, Flac
မျက်လုံးအိမ် HDMI2.0a x 1၊ USB2.0 x 1၊ စွမ်းအင်ဆက်သွယ်မှု x 1၊ အော်ဒီယို x 1
ထုပ်ပိုးစာရင်း 1 x ကို remote control
1 Plug များတပ်ဆင်ထားသည်
HDMI Cable ကို 1 x
ထုတ်ကုန်ကကြီးတယ် အကြီးအအခြေအနေရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အင်တာနက် Wi-Fi ကိုဆက်သွယ်ဖို့အခက်အခဲအနည်းငယ်ရှိခဲ့ပေမယ့်တစ်နေ့တာမှာအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါစတိုးဆိုင်အထူးအကြံပြုလိုတယ်။
брак။ припервойзагрузкеглюк။ неработаетпульт။ ဝိုင်ဖိုင်မရှိပါ Android TV အဝေးထိန်းသည်မподключается.Bluetoothнеработает။ продавецтупитпочерному။ открываюспор
Bom, မင်္ဂလာပါ!esem duvidas valeapena esperar !! aaahenão fui taxado ။
တစ် ဦး အတွေ့အကြုံရှိသူတစ် ဦး သည် mercadoria, အဘယ်သူမျှမကနောက်ဆုံးကော်ပိုရေးရှင်းအတွေ့အကြုံရှိအတွေ့အကြုံရှိအတွေ့အကြုံကိုက de ကော်ပိုရိတ် errado က de rastreamento